China Polyester & Nylon Nucleator P-24 Mugadziri uye Mutengesi | BGT
P-24 isanganiswa yemuviri mashoma maNyukireya Mumiriri werefu cheni polyester sodium munyu kuti ikurumidze kuita crystallization yePolyester neNylon.
Iyo inogona kushandiswa PET, PBT uye Nylon.
P-24 musanganiswa wemuviri wezvishoma nucleating mumiririri weketani refu polyester sodium munyu yekumhanyisa crystallization yePolyester neNylon.
1. Kupfupisa kuumbwa kwekutenderera uye kuwedzera kugadzirwa.
2. Kuvandudza kuparadza.
3. Kuvandudza kuenzana kwekugadzikana kwezvigadzirwa.
4. Deredza chigadzirwa shrinkage.
5. Kudzivirira kunetseka kutsemuka kwezvigadzirwa.
6. Kuvandudza michina zvivakwa (kuwedzera tensile simba uye kuomarara).
7. Kuvandudza kubwinya kwepasi.
0.2% -1% (kazhinji inenge 0.5%)
20 kg / bhegi
Pashure: Optical Brightener Ob-1
Zvadaro: PET Nucleating Mumiriri PET-98C
PET Nucleating Mumiriri P-24